'केहि विशिष्ट कारणहरु बाहेक मुटु रोगीले कोरोना खोप लगाउन हुन्छ' : प्रा.डा.भगवान कोईराला - सफल नेपाल
२०७८ असार ११ शुक्रबार, ०४:०८
‘केहि विशिष्ट कारणहरु बाहेक मुटु रोगीले कोरोना खोप लगाउन हुन्छ’ : प्रा.डा.भगवान कोईराला
नेपालमा कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त भइरहेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएको पनि महिना दिन पुग्न लागेको छ । निषेधाज्ञा फेरि पनि थपिने संकेत देखिएको छ । यो अवस्थामा सबै मानिस घरभित्र नै बस्नु बाहेकको अर्को विकल्प छैन । त्यसो त यो महामारीमा बिभिन्न प्रकारका दीर्घरोगी पनि घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा मुटुरोगका विरामी र मुटुरोग लाग्नबाट बच्नका लागि केकस्ता कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ प्रा. डा.भगवान कोईरालासँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश ।
घरमा बसीरहेका मुटुरोगीहरुको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो कुरा त यो समयमा उहाँहरुलाई अझ धेरै सुभाव सल्लाहको आवश्यकता पर्दछ । उहाँहरुलाई कोभिडको बेला अलि बढि जोखिम हुन्छ । घरमा बस्दा उहाँहरुले सामाजिक दुरीको बिशेष ख्याल गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । बाहिर गइरहने मान्छेसँग नजिक पर्नु हुँदैन । यस्तै पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्ने जस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरु त पालना गर्नै पर्छ ।
मुटुका बिरामीहरु सकेसम्म बाहिर नजाने यदि बाहिर जानै पर्ने अवस्था भए मास्क लगाउने, ६ फिटको सामाजिक दुरी कायम गरेर हिड्ने, सेनिटाईजर पटक पटक प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ । मुटुरोगीका बिरामीहरुले नियमानुसार खोप लगाउन मिल्ने छ भने लगाउँदा हुन्छ । मुटुरोग भएकै कारणले नलगाउने भन्ने हुँदैन । मुटुरोग लागेकोे भए पनि आफूलाई मुटुको क्षमताले दिएसम्म सधै स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्दछ । धुम्रपान र मध्यपान त मुटुरोगिले गर्दैनन् नै होला तर पनि गरेको भए मध्यपान र धुम्रपान गर्नु हुँदैन ।
मुटुका बिरामीले अहिलेको समयमा सधै खाईरहने साधारण खाना नै खानुपर्दछ । म दोहोर्याएर फेरि भन्छु कि मुटुका बिरामीले बिशेषगरी यो समयमा शारिरीक व्यायाममा नै ध्यान दिनुपर्दछ । मुटुका विरामीले आफ्नो श्वासप्रश्वासमा पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म कुनै औषधि, जडीबुटि खाएर कोरोना रोकथाम हुन्छ भन्ने छैन, त्यसकारण मुटुका बिरामीहरुका लागि चिकित्सकहरुले खान मिल्ने भनेका कुराहरु बाहेक अरु नखानका लागि म आग्रह गर्दुछु । जसले गर्दा तपाईको स्वास्थ्य थप राम्रो हुन्छ । –रासस
२०७८ जेष्ठ १३ गते सम्पादित l १३:५१